बैंकको ब्याज किन झर्‍यो एक प्रतिशतमा ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
बैंकको ब्याज किन झर्‍यो एक प्रतिशतमा ?
७ माघ २०७२, बिहीबार ०३:२१
काठमाडौं । बैंकमा अत्यधिक पैसा थुप्रिएपछि र त्यो अनुपातमा कर्जा नगएपछि साधारण निक्षेपको ब्याज अहिलेसम्मकै न्यून एक प्रतिशतमा झरेको छ। लगातार घट्दै गएको निक्षेप ब्याजदरले बैंकमा पैसा राख्दा ब्याजमार्फत अन्त्यन्त न्यून रकम प्राप्त हुने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग आयातमा आधारिक क्षेत्रमा बढी हुने गरेको छ। सामान आयात गर्न दिने कर्जा र त्यो खरिदका लागि दिने कर्जाको अनुपात बढी छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि आयात व्यापार खस्केको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ – सामान नआएका कारण खरिदमा दिने कर्जाको माग छैन् ।
प्रकाशित : ७ माघ २०७२, बिहीबार ०३:२१